तातो पानीले नुहाउदा र काखमा ल्यापटप राख्दा नपुंसकता हुने खतरा !
बिहिवार, फागुन १५, २०७६
Thu, Feb 27, 2020 at 11:30am
साहित्य महोत्सव धनगढीमा विश्वभरिका नेपालीभाषी साहित्यकारहरूकाे जमघट #आहा खबर# बानेश्वरकाे भव्य विवाहमा दुलाहानै नआएपछि मच्चियाे हल्लीखल्ली #आहा खबर# बिहीबार सार्वजनिक बिदा #आहा खबर# १६ प्रहरीले बाँडीचुँडी खाए तस्करीकाे ३६ तोला सुन #आहा खबर# ओलीसहित सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाबुराम भट्टराईकाे माग #आहा खबर# आजदेखि मौसममा सुधार, शनिबार फेरि वर्षा #आहा खबर# टेनिस सुन्दरी सारापोभाले गरिन् सन्यासको घोषणा #आहा खबर# दिल्लीमा हिन्दु–मुस्लिमबीच हिंसात्मक झडप, मर्नेको संख्या २१ पुग्यो #आहा खबर# नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज निर्णयमा मेरो संलग्नता छैन : देउवा #आहा खबर# चीनसहित ३४ मुलुकमा फैलियो कोरोना भाइरस #आहा खबर# ‘धुर्मुस–सुन्तली’को काइते प्रचार शैली #आहा खबर# यस्ताे छ आजकाे मौसम पूर्वानुमान, बर्षा र हिमपातको सम्भावना #आहा खबर# बढ्दै बाँस्कोटाको मनोमानी, कार्यविधि मिचेर ९७ आइटी ल्याब स्थापना गर्न दबाब #आहा खबर# नेपाल ट्रस्टको १७२ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याइने #आहा खबर# नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र : प्रचण्ड, देउवा, बाबुरामदेखि वामदेव र गच्छदारसम्म जोडिए #आहा खबर#
शुक्रबार, ६ आषाढ २०७६,	आहाखबर	1.06K
एजेन्सी, ६ असार ।
जुन पुरुष काखमा ल्यापटप राखेर चलाउन उसको प्रजनन क्षमता घट्छ । यदी तपाई आफ्नो ल्यापटप काखमा राखेर चलाउने गर्नुहुन्छ भने सावधान हुनुस् ।
एक अध्ययनले शुक्रकिट चिसो वातावरणमा राम्रो किसिमले विकशित हुने देखाएको छ । उक्त अध्ययनले पुरुषहरुले तातो पानीले नुहाउने बानीले नपुंसकताको कारण हुनसक्ने देखाएको छ । चिसो पानीले नुहाउँदा पुरुषमा शुक्राणुको उत्पादन पाँच गुणाले बढ्ने पनि एक तथ्यले फेला पारेको छ ।
डाक्टरहरुका अनुसार यसो गर्दा पुरुषहरुको स्पर्ममा असर पर्छ र तपाई पिता बन्ने सुखवाट टाढा हुन सक्नुहुन्छ । व्रिटेनमा भएको एक घटनाले यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।
ब्रिटेनका स्कट रीड नामक एक ब्यक्ति पिता वन्न नसकेपछि उनले डाक्टरहरुसँग सल्लाह गर्नपुग्दा उनलाई डाक्टरले ल्यापटम काखमा राखेर चलाउने गरेको कारण देखाए ।
उनको शरीरमा स्पर्म भरपूर मात्रामा उत्पादन भएपनि स्पर्मले सक्रियता नपाएकाले यस्तो असर गरेको थियो । डाक्टरका अनुसार स्कटको स्पर्म हिट ड्यामेजको शिकार वनेको थियो ।
खासगरी ल्यापटप काखमा राख्दा ल्यापटपवाट निक्लिने तातो हावाका कारण यस्तो हुने गर्दछ । यस्तो समस्या खाना पकाउने काम गर्ने कुक वा सेफलाई पनि हुने गर्दछ । ताते ठाउमा काम गर्दा तीनीहरुको स्पर्म ड्यामेज हुने गर्दछ ।
मज्जाले घाम ताप्नुहोस् । घाम ताप्दा भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । यसले मानिसमा प्रजनन क्षमता बढाउँछ । भिटामिन डी ले महिलामा सेक्स हर्मोन प्रोजेस्टोन तथा एस्टोजेनको स्तर बढाउँछ जसबाट महिनावारी नियमित हुने तथा गर्भधारण सहज हुन्छ । पुरुषमा घामले शुक्राणुको संख्या बढाउन मद्धत गर्छ ।
आराम गर्न समय निकाल्नुहोस् । महिलाहरुको प्रजनन क्षमतामा तनावले ठूलो असर पूराउँछ । तनाव र बढि व्यस्तताले पुरुषमा शुक्राणुको उत्पादन कम गर्छ र यौन इच्छा पनि घटाउँछ ।
दुध प्रसस्त खानुहोस् । एक अध्ययन अनुसार जो महिलाले दिनमा एक पटक दुग्धजन्य पदार्थ खान्छन् उनीहरुमा बाँझोपनको खतरा एक चौथाइले घट्छ ।
धूमपान गर्ने महिलाहरुको प्रजनन क्षमता धूमपान नगर्ने महिलाहरुको तुलनामा ३० प्रतिशत सम्म कम हुने विज्ञहरुको भनाई छ । धूमपानको कारण गर्भाशयमा गर्भाधान तथा भ्रुणको विकाश हुनमा समेत बाधा पर्नसक्छ ।
अब पाइलटबिना नै विमान चल्छन् !
मास्कको अभाव हुने वितिकै बेइजिङले निर्माण गर्‍यो नयाँ उद्योग
विमान परिचारिकाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई नचिनेपछी
अष्ट्रेलियामा महिलाले सबैभन्दा धेरै मिठाइ खाने प्रतिस्पर्धा जित्ने चक्करमा फटाफट केक खाइन्, सास फेर्न नसकेर मृत्यु
उडिरहेको विमानको इन्जिन फेल भएपछि ९५ यात्रुको ज्यान जोखिममा
विमानस्थलमा खुल्यो राज : पेटभीत्र ६४ लाखको हीरा
आफ्ना ट्वीटर फलोअर्सलाई १ अर्ब रुपैयाँ बाँड्दै यी व्यवसायी
पर्सलाई पछाडि त राख्नुहुन्न ? लाग्नसक्छ यस्ता रोग
अमेरिकामा ७ महिने शिशु मेयर !
प्रेमीले प्रेमिकालाई विना मेकअप देखेपछी दिए ब्रेकअप !
आज यस वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन !
हिउँले बन्द खप्तडको बाटो खोल्दै सेना : रातको समयमा तापमान माइनस ८ डिग्री
जडीबुटी सङ्कलन गर्न गएका एकै गाउँका १२ जना बेपत्ता
गौरिकाको नयाँ कीर्तिमान : सागको एउटै संस्करणमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली
किन मन पराउँछन् कटीहरु हाँसो–ठट्टा गर्ने केटा ?
जङ्गली हात्तीले दुः ख दिएपछि झापालीहरु रातभर नसुती जाग्राम
दुई अर्ब वर्षअघिको महाविष्फोटन जसले पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनायो !!
यी ८ धनाढ्य पुरूषसँग छ आधा विश्वको सम्पत्ति
यदी पार्टनरको राशि तपाईको राशिसँग मिल्छ भने तपाईको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो !!
भारतीय जलसेनामा पहिलो महिला पाइलट शिभाङ्गी
यि हुन् संसारकै सबैभन्दा खतरनाक र सुरक्षित देशहरू
धार्मिक परम्पराअनुसार यी हुन् युवतीलाई सर्वश्रेष्ठ बनाउने ३२ गुण !
सुन तथा अन्य धातु पृथिवीमा आफैं उत्पन्न भएको होइन ?
फेशन देखाउनका लागि टाइट जीन्स लगाउनुहुन्छ ? यस्ता रोग लाग्ला !
धोका के हो ? महिला पुरुषको संख्या बराबरी !
जिब्रोबाट यसरी थाहा पाउन सकिन्छ व्यक्तीकाे स्वभाव
पहिलो प्रेम किन चाहेर पनि विर्सन सकिदैन् ? यस्तो छ कारण
डीभी परेर वडाध्यक्ष अमेरिकामा, वडा कार्यालय नेतृत्वविहीन
सुन्दा पनि अचम्म : एउटै बोकाको मूल्य झण्डै ३ लाख
सिङ्गल्स डे : चिनियाँ उपभोक्ताले ६८ सेकेन्डमै १ अर्ब डलरको सामान खरिद गरे
विश्वकै मूल्यवान रत्न हीरा यसरी बन्छ !
ट्राफिक बत्तीको रङ कसरी छानियो ? यस्तो छ इतिहास
सलमान खानले खोले बिहे नगर्नुको रहस्य
घट्यो सुन–चाँदीको मुल्य, कति छ तोलाको ?
साहित्य महोत्सव धनगढीमा विश्वभरिका नेपालीभाषी साहित्यकारहरूकाे जमघट
बानेश्वरकाे भव्य विवाहमा दुलाहानै नआएपछि मच्चियाे हल्लीखल्ली
बिहीबार सार्वजनिक बिदा
१६ प्रहरीले बाँडीचुँडी खाए तस्करीकाे ३६ तोला सुन
ओलीसहित सबै प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बाबुराम भट्टराईकाे माग